Benefits of HavingaPet - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
1. Allergy Fighters အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများတွင် allergic ဖြစ်ခြင်းနှင့် asthma ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း သိသိသာသာ ကျဆင်းကြောင်း လေ့လာချက်များ အရ သိရှိရပါတယ်။
2. Date magnets ကြင်ယာဖက်တွေ့ခြင်းအတွက် အခြေခံကျတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကတော့ ခွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးလေးကို လိုက် ထိန်းကျောင်းရင်း ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ဖြစ်ရသည်မှာလည်း မနည်းမနောပင်။ ‘ခွေးလေးက ချစ်စရာလေးနော်’ ဟူသော စကားလေးမှ အစချီကာ လမ်းထိပ်မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်မှ နိဗ္ဗာန်ထိ အတူ သွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပေလိမ့်မည်။
3. Dogs for aged အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်သူများနှင့် alzheimer ရောဂါ ခံစားနေရသူများ အနေဖြင့် တိရစ္ဆာန်လေးများ ရှိနေခြင်းကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီး စိတ်ခံစားမှုများ ကုစားပေးသည့်အတွက် အထီးကျန်ဆန် မှုကိုလည်း လျော့ချပေးပါတယ်။4.Good for mind and soul စိတ်ချမ်းသာစေရုံမျှ မက ကိုယ်ကိုလဲ ကျန်းမာစေပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ အရ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ ခံစားနေရသူများတွင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ရှိသူများသည် စိတ်ဖိစီးမှု depression ပိုနည်း‌ စေပါတယ်။ သွေးတိုးရှိသူများ တွင်လည်း သွေးပေါင်ချိန်ထိန်းညှိခြင်း‌တွင်ပါဝင်နေပြန်ပါတယ်။
5.Good for heart နှလုံးဖောက်နေချိန် ခွေးဟောင်သံကြောင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများ ရောက်လာကာ ဆေးရုံသို့ အချိန်မှီ ပို့ပေးရာမှတစ်ဆင့် အသက်ဆုံရှုံးမှု ဘေးမှ ကင်းလွတ်သွားသော ဖြစ်ရပ်များသည် ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ရှိသည် မဟုတ်ပေ။ အပြင်လောကတွင်လည်း အလားတူဖြစ်ရပ်များ ကြားဖူးလေ့ရှိပါတယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိခြင်းကြောင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းကိုလည်း လျော့ချပေးနိုင်ပြန်ပါတယ်။
To slow down the aging process even after the age of 50
🤷‍♂️ အသက် ၅၀ ကျော်လာလည်း အရွယ်ရင့်လာတာတွေ နှေးကွေးသွားအောင် အသက် ၅၀ ကျော်လာလည်း အရွယ်ရင့်လာတာတွေ နှေးကွေးသွားအောင် အသက် ၅၀ ကျော်လာတာနဲ့အမျှ လူ့ခန္တာကိုယ်ရဲ့ အရေပြားတွေဆိုတာ လျော့ရဲလာပါတယ်။ ပါးရေနားရေတွေလည်းတွန့်လာမယ်။ ဒါဟာ အသက်ကြီးလို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ သဘာဝ ဖြစ်စဥ်တွေပါပဲ။…